"WAVE", सम्पर्कहरू | बीचको निश्चित स्थान प्रणाली म म्याकबाट हुँ
लहर तपाईको परिवार र साथीहरूलाई भेट्ने यो सब भन्दा सजिलो तरीका हो। दिनभरि कति पटक तपाई कहाँ हुनुहुन्छ भनेर ठ्याक्कै थाहा पाउनु पर्छ? एक छोरी उनको आमाको साथ जो रातमा बाहिर जान्छ, काम बैठक, तपाईंको साथीहरूसँग कन्सर्ट, स्की यात्रा ... वास्तविकता यो हो कि हामीले एक अर्कालाई प्रभावकारी र प्रभावशाली ढ locate्गले भेट्टाउन सक्षम हुनु आवश्यक छ। हामीलाई कल गर्न वा लेख्न जारी राख्छौं। र यदि हामी चालमा छौं भने, कार्य अझ धेरै जटिल हुन्छ। यस कारणले यो सिर्जना गरिएको छ लहर, एक मोबाइल अनुप्रयोग जुन मानिसहरूलाई सँगै निकाल्ने उद्देश्य हो। वास्तविक जिन्दगीमा। मोबाइलबाट हामी कुरा गर्छौं, कुराकानी गर्छौं, नेभिगेट गर्छौं, खेल्छौं ... तर हामी आफैंलाई छिटो र सजीलो भेट्टाउँदैनौं। लहर भेट्ने तरिका क्रान्तिमा आएको छ, कुनै स्मार्टफोनको "आवश्यक" हुन्छ।
यस्ले कसरी काम गर्छ लहर?
तपाईं एक खोल्न सक्नुहुन्छ लहर तपाईंको पात्रोमा कुनै पनि सम्पर्कहरू छन् जुन अनुप्रयोग पनि स्थापना गरिएको छ। तपाईंले कसैलाई पनि थप्नु पर्ने छैन, पछि लहर यसले स्वचालित रूपमा मनपर्ने स्क्रीनमा यी सबै सक्रिय सम्पर्कहरू देखाउँदछ। तपाईंले भर्खर इच्छित सम्पर्क छान्नुपर्नेछ र तपाईंलाई निश्चित समयको लागि पत्ता लगाउन अनुरोध गर्नुहोस् (१ 15 मिनेटदेखि १२ घण्टा सम्म)। जब (र केवल यदि) तपाईंको सम्पर्कले तपाईंको अनुरोध स्वीकार गर्दछ, एक प्रत्यक्ष, निजी नक्शा तपाईं दुबैको लागि खोलिनेछ वास्तविक समयमा तपाईंको दुई स्थानहरू देखाउँदै। तपाईं अवधि परिवर्तन गर्न, यसलाई मेट्न, वा पछि अनुरोध बचत गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटकको समय थियो, त्यो लहर यो स्वचालित रूपमा म्याद सकिन्छ र तपाईं आफ्नो स्थितिहरू हेर्न रोक्नुहुनेछ, जबसम्म तपाईं दुबै लाई पुन: सक्रिय गर्न चाहानु हुन्न लहर। तपाईं पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ छालहरू समूह, १० व्यक्ति सम्म थप गर्न सक्षम हुँदै। थप रूपमा, मा छालहरू समूह को निर्माता एक सेट गर्न सक्छन् "बैठक पोइन्ट"(बैठक पोइन्ट), सबै सदस्यहरूको लागि दृश्यात्मक।
"हाम्रो फरक मान गोपनीयता, सरलता, गतिशीलता र सेवाको उपयोगिता हो।"
लहर यो एक अनुप्रयोग हो नि: शुल्क र कुनै विज्ञापनहरू विश्वव्यापी रूपमा सुरू, यसमा उपलब्ध App स्टोर आईफोन S जीएस वा उच्च को लागी। Android को लागी चाँडै आउँदैछ!
वेभ डाउनलोड गर्नुहोस्
अधिक जानकारीको लागि कृपया www.waveapplication.com हेर्नुहोस्। तपाईं अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ लहर सिधा यी लाइनहरु को लागी छवि मा क्लिक गरी।
लहर जनवरी २०१ in मा स्थापित एक कम्पनी हो जुन एक उद्देश्यको साथ सिर्जना गरिएको हो: कुनै विचार विकास गर्न जुन कुनै डिजिटल प्रयोगकर्ताको हालको आवश्यकता पूरा गर्दछ। हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको उपयोगी सेवा निर्माण गर्नु हो जसले सहयोग गर्दछ र दिनहुँको जीवनको सुविधा पुर्‍याउँछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » "WAVE", सम्पर्कहरू बीचको निश्चित स्थान प्रणाली
एप्पलले Xprotect परिभाषा अपडेट गर्दछ